Fahasamihafana eo amin'ny sandblasting sy ny fipoahana bala
Ireo dingana roa ireo dia ampiasaina hanadiovana ny velaran'ny faritra anaovana asa sy hanesorana ny vovoka. Matetika izy io dia ampiasaina alohan'ny sary hosodoko na fandokoana. Mampiasa haino aman-jery maranitra maranitra, na fasika, hanakodia eo amboniny somary toy ny fikapohana ...
Ahoana ny fomba hanesorana ny harafesina amin'ny blaster fasika
Ny harafesina sandblasting avy amin'ny fiara dia hanamora ny famerenana sy ny fandokoana. Azonao atao ny mampiasa karazana haino aman-jery isan-karazany amin'ny sandblast, arakaraka ny vy amin'ny fiara sy ny haben'ny velarany. Sandblasting dia ilaina alohan'ny hanombohanao mamerina manala ny fako amin'ny sehatr'asa lehibe izay enoug ...
Ny anjaran'ny milina famaohana fasika sy milina fanapoahana tifitra
Ny fitaovana fanapoahana fasika dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fizotrany, mazava ho azy, misy indostria maro hafa, vokatra maro no nampiasaina tamin'ny milina fanapoahana fasika hiatrehana izany. Ny milina fanapoahana fasika dia ny fampiasana ny rivotra voahidy, ny fasika, hafainganam-pandeha avoakan'ny basy basy izay misy ny harafesin'ny produ ...
Masinina famaohana tifitra - Applications
Betsaka ny fampiharana ny masinina miparitaka. Ny fampiharana voalohany sy lehibe indrindra dia ny fanadiovana ny casting hanala ny fasika malemy sy may ary ny refy avy amin'ny fanariana ferrous sy tsy ferrous. Ny dingan'ny fipoahana fitifirana dia mampihena ny porosity ary mampitombo ny tsindry amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alimina ...
faritra samihafa amin'ny milina sandblasting
Fizarana telo samy hafa momba ny milina sandblasting Ny fametrahana Sandblasting matetika dia misy faritra telo samy hafa: ny madiodio tenany, ny compresseur an'habakabaka ary ny nozatra blaster. Ho an'ny fanaovana sary sokitra sy fanadiovana zavatra madinidinika dia ilaina ihany koa ny toeram-piasana mitazona ny sombin-kazo toy ny collecto ...
inona ilay masinina Shot blaster
Ny milina blaster shot dia fitaovana iray tena ilaina amin'ny sandblasting. Mazava ho azy fa tsy milina blaster iray no voatifitra, satria misy koa fomba maro samihafa amin'ny sandblasting. Ny milina blaster shot dia mety manana kodiarana efatra, enina, valo na mihoatra aza, ary mety manana fomba turntable an'ny ...
Ny vidin'ny milina fanapoahana
Ny vidin'ny milina fanapoahana HST no mora indrindra amin'ny mpamokatra indostrialy iray ihany. Ny vidin'ny milina Sandblasting, fantatro kely amin'ny vidin'ny milina fanapoahana fasika an-tserasera, ary avy amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fifampiresahana amin'ny telefaona miaraka amin'ny vidin'ny mpanamboatra milina famaohana masinina manaraka ...